PeaZip 8.2: nyowani vhezheni pamwe nekuvandudzwa kwekushandisa pakoni | Linux Vakapindwa muropa
PeaZip ndiyo imwe yeanonyanyo shandiswa uye anoshanduka-shanduka GUI akamanikidza mamaneja emafaira paGNU / Linux. Kune avo vasingade kungoshandisa koni yemabasa aya, nechirongwa chakareruka ichi vanozokwanisa kutsikisa uye kupwanya chero faira kana dhairekitori zviri nyore sezvavaizoita muzvirongwa zvakafanana seIzarc, WinRAR, WinZip, nezvimwe.
Ikozvino kunouya iyo PeaZip 8.2 vhezheni, inowanikwa kune ese ari maviri GNU / Linux uye Windows. Mune yekuvandudza inotsigirwa anosvika mafomati makumi maviri neshanu faira yekumanikidza uye kubvisa. Unogona kugadzira mafaira ekuzvitsvakira wega, kana kugadzira mapurogiramu anotakurika asingadi kuisirwa, sezvaungaita mune zvimwe zvirongwa papuratifomu yeMicrosoft.
Iyi software zvakare yakavhurwa sosi uye zvizere mahara, ane rezinesi pasi peGNU LGPLv3. Pasuru yekushandisa yakavanzika kana yehunyanzvi, pasina chero kuwedzerwa kushambadzira. Chishandiso chine simba kwazvo uye chakakwana chevatungamiriri vanofanirwa kubata mafaera avo nyore.
Iyo inotove nekuchengetedzwa kwekuitwa senge iyo kunyorera kuburikidza neAES, Twofish, Nyoka, kubviswa kwakachengeteka, zvishandiso zvekutarisa mahesheni emafaira, nezvimwe.
Ikozvino nekuburitswa PeaZip 8.2 inouya nezvikwidziridzo izvo zvakanyanya kutarisisa pane iyo peazip raira, ndiko kuti, muchombo chekushandisa kuburikidza nemutsetse wekuraira. Uye zvakare, ikozvino yave kugona kuratidza nzira yekumanikidza, timestamp yekushandurwa, kugadzira, kuwana, uye nhamba yemafaira emukati mune dhairekitori.
Kune rimwe divi, PeaZip 8.2 inokutendera iwe chengeta mafaira atotorwa kare kunyangwe kana nzira yekubvisa ikakundikana nekuda kwekukanganisa uye ikakanganiswa. Izvo zvinokutendera iwe kuti ugone kupora zvimwe zvemukati kana zvikashatiswa.
PeaZip 8.2 yakananganawo nekuvandudza ruzivo rwevashandisi kunyanya kune maLinux masisitimu. Uye kusvika kune avo makumi maviri nemashanu mafomu akatsigirwa, izvozvi .apkm, .apks, .aab, zvinoenderana neApple, uye .lz kana Lzip yeLinux yakawedzerwa.
Mamwe mashoko - Website webasa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » PeaZip 8.2: nyowani vhezheni pamwe nekuvandudzwa kwekushandisa pakoni